ပီတိ: ဒီရေး ဟိုရောက် ၊ ဟိုရေး ဒီရောက် - ၂
Posted by P.Ti at Tuesday, August 07, 2007
ဦးနာအောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်ဝေဖန်သွားပုံကို ဒါလည်းစဉ်းစားစရာပဲဟု ပြောသူလဲရှိပါသည်။ ဒုတိယအကြောင်းပြချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ပုံပြင်းထန်လွန်းသည်ဟု ဆိုသူလည်းရှိပါသည်။ ပြည်သူကိုအပြစ်တင်လို့ မဖြစ်ဘူးဆိုတာကို ပြောလိုခြင်းက အဓိကဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြေင်းကို မကြိုက်ရင်ချန်ထားခဲ့ကြပါ။ ပထမပိုင်းမှာတင် ပြည်သူမှာအပြစ်မရှိကြောင်း ( ဦးနာအောက် ကျရှုံးရတာပြည်သူနှင့် မဆိုင်ကြောင်း) ထင်ရှားနေပြီထင်ပါသည်။ သင်ခန်းစာယူစရာသမိုင်းပညာ တွင်လည်းကျွန်တော်အမြင်ကို ရေးသားခဲ့ပါပြီ။ အခုလိုလာရောက်ဆွေးနွေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဦးနာအောက် ရှုံးနိမ့်တာဟာ ပြည်သူမှာ အပြစ်မရှိပေမယ့် ပြည်သူနဲ့ အများကြီးဆိုင်ပါတယ်။ ပြည်သူရဲ့ အားပေးမှု မရလို့ရှုံးနိမ့် တာပါ။ ပြည်သူကို အသိဥာဏ်ပေးရမယ် ဆိုတာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ဒီနေရာ သိသာပါတယ်။ သင်ခန်းယူစရာပါပဲ။ အခုလိုလာရောက်ဆွေးနွေးတာ ရွက်ဝါကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ကျမအထင်တော့ ရွက်ဝါက ခုလို တင်ပြလိုက်လို့ ၊ ဆွေးနွေးဖြစ်ကြတာ ။ ကျမလို ဖတ်သူအတွက် အတော်လေး အကျိုးရှိတဲ့ အမြင်တွေပါပဲ ။ ခုလို တဦးနဲ့တဦး နားလည်ပြီး ဆွေးနွေးကြတာ အားရစရာပဲ ။
ကိုပီတိရေ.. အင်း.. တခါတလေကျ human relations ဆိုတာ very fragile glass နဲ့ တူတယ်လို့ မြင်မိတယ်း)
I agreed and understand the feeling when other does not keep their own word even the small thing. S I would never forget or forgive about that even i said "No Worries".
ညီမလေး CQ ရေ… ညီမလေးဘယ်လိုခံစားရတာဆိုတာ နားလည်ပါတယ်။